Dad badan oo ku dhintay qaraxii is-miidaaminta ahaa ee Muqdisho (Faah-faahin) - Caasimada Online
Home Warar Dad badan oo ku dhintay qaraxii is-miidaaminta ahaa ee Muqdisho (Faah-faahin)
Dad badan oo ku dhintay qaraxii is-miidaaminta ahaa ee Muqdisho (Faah-faahin)
Muqdisho (Caasimada Online) – Faah-faahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qarax duhurnimadii Maanta lala eegtay Saraakiil Ciidan oo ku sugnaa meel aan ka fogeyn taliska Booliska Gen. Kaahiye ee magaaladda Muqdisho.
Qaraxa oo la sheegay inuu fuliyey qof watay jaakad lagu soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa waxaa uu ka dhacay Maqaaxi Shaaha laga cabo oo ku taalla agagaarka Dugisga Tababarka Ciidanka Booliska ee Janeraal Kaahiye ee degmada Xamar jajab.
Khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa la soo sheegayaa inuu ka dhashay qaraxaas, waxaana goobta xiray ciidamo badan oo ka tirsan booliska Soomaaliya.
Inta la xaqiijiyey waxaa qaraxa ku dhintay ugu yaraan 5 qof oo isugu jiro dad shacab ah iyo askari ka tirsan Ciidamada Dowladda Soomaaliya. Sidoo kale qaraxa ayaa waxaa ku dhaawacmay 8 qof oo isugu jira dad shacab ah iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda. Waxaa sidoo kale qaraxa ku dhintay qofkii is-qarxiyey.
Khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxaa xaqiijiyey afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay.
Dhanka kale kooxda Al-Shabaab oo looga bartay qaraxyada noocaan oo kale ah weli kama aysan hadlin qaraxa Maanta ka dhacay Muqdisho ee lagu beegsaday saraakiil ka tirsan Ciidamada Booliska.